Lease Line layer2circuit အကြောင်းလေးများဒူတိလဲဟင်!!!!!! — MYSTERY ZILLION
Lease Line layer2circuit အကြောင်းလေးများဒူတိလဲဟင်!!!!!!
October 2008 edited November 2008 in Networking
ဒီရိုးမယ်ဖွဲ့စရာပြောစရာမလိုအောင် ပဲ့လွန်းတဲံ.connection ကနေ ရုန်ထွက်ချင်ပီကွယ်၊
ဒီတော. layer2 lease line circuit Experience လေးများရှိ၇င် ေ၀မျှပေးပါလား။
ကို NPThant ရေ...
အကိုပြောတဲ့ Lease Line လှမ်းချိတ်မယ့်ကိစ္စကတော့ငွေကြေးအကုန်အကျအရမ်းများတယ်ထင်တယ် ဗျ။ အကုန်အကျခံနိုင်တယ် ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီလိုင်းကတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အဲ့ဒါတွေသုံးထားတဲ့ ကုမ္ပဏီ တွေက နှစ်ခု၊ သုံးခုလောက်ပဲရှိမယ်ထင်တယ်။ တိုတယ် တို့ စလမ်ဘာဂျာတို့ကတောသုံးကြတယ်။ MZ မှအကိုကြီးများလည်း အကြံပေးကြပါဦး။ အခု Fi-Optical လေးစောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးလား။ ဘာများထပ်ပြောင်းဦးမလဲလို့။ ဒီမှာ လည်းသွားလေ့လာကြည့်လိုက် ပါဦး။